တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ၀န်ကြီး H.E. Mr. Zhao Kezhi အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မေ ၉၊ ၂၀၁၈ မေ ၉၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ၀န်ကြီး H.E. Mr. Zhao Kezhi အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ မေ ၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ၀န်ကြီး H.E. Mr. Zhao Kezhi အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ ၊ပွညျသူ့ လုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာန ၊ ဝနျကွီး H.E. Mr. Zhao Kezhi အား ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
မည်သူမဆို နိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေအရ စစ်ဆေးမှုများ ခံယူရမည်ဖြစ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ The Yomiuri Shimbun သတင်းဌာန၊ အာရှဒေသဆိုင်ရာ အထွေထွေဗျူရိုအကြီးအကဲ Mr.Norimasa Tahara ၏ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားခြင်း
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Udon Thani ခရိုင်ရှိ Wat Pa Baan Tat ဘုရားကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အား ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး ထိုင်း-လာအို ချစ်ကြည်ရေးတံတားသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ (ရုပ်သံသတင်း)
မတ် ၉၊ ၂၀၁၉ Admin 0